हे भगवान ! अर्को जुनीमा अष्ट्रेलियाको कुकुर बनाइदेऊ::KhojOnline.com
हे भगवान ! अर्को जुनीमा अष्ट्रेलियाको कुकुर बनाइदेऊ
- राजन घिमिरे
कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने हामी नेपालीहरू भन्ने गर्छौं ‘तँ त कुकुरजस्तो रहिछस्, काम नलाग्ने, खत्तम । कस्तो कुकुरजस्तो जीवन तेरो ? के बाँच्छस् ?’
लेखक- राजन घिमिरे
कुकुर भनेपछि हेयको दृष्टिले हेर्ने, हेप्ने अनि घृणा गर्ने र खराब जनाबरको रूपमा लिने नेपालीहरू जब अष्ट्रेलिया आउँछन् तब कुकुरलाई हेर्न उनीहरूको सोच र दृष्टिमा नै परिवर्तन आउँदोरहेछ । भनिन्छ नि देश अनुसारको भेष ।
अर्को कुरा, एक दिन कुकुरको पनि दिन आउँछ भन्ने कुरा अष्ट्रेलिया आएपछि मित्थ्या साबित हुन्छ । किनकि एक दिन होइन, यहाँ त सबै दिन, समय, बार र मौसम कुकुरकै छ । साथमा कुकुर भएन भने अष्ट्रेलियालीहरू केही खान पनि रूचाऊँदैन् ।गजब छ कुकुरप्रतिको माया, मोह अनि सर्मपण ।
कुकुरको त्यो आलिसान जीवन देखेर अन्य देशबाट अष्ट्रेलिया आएकाहरू लोभले र्याल काट्छन् । मानिसको भन्दा कुकुरको मूल्य, मान्यता, उचाइ र अधिकार बढी छ यहाँ ।
नेपालमा रहँदा कुकुरलाई छि छि र दुरदुर गर्ने नेपालीहरू अष्ट्रेलियामा कुकुरको शान देख्दा तीन छक्क पर्ने गर्छन् । आफ्ना बृद्द बुबा आमालाई भन्दा कुकुरलाई पाल्न रूचि देखाउँछन् यहाँ । आमा बुबालाई पैसा तिरेर एज केयरमा धपाउँछन् तर कुकुरलाई आफूसँगै सुताउँछन् यहाँ । फादर डे र मदर डे यहाँ पनि मान्छन् । तर, अरूकै हातबाट उपहार जान्छ ती आमाबुबालाई । आमा बुबालाई भेट्ने र उनीहरूसँग कुरा गर्ने फूर्सद छैन यहाँ । एज केयरमा छोडिएका आमाबुबाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता छैन । तर, कुकुरले केही खाएन वा निदाएन भने उनीहरू रातभर कुरेर बस्छन वा हस्पिटल लगिहाल्छन् । पारिवारिक माया मोह वा संस्कार देखिँदैन यहाँ । त्यसो त यही पनि हुन सक्छ उनीहरूको संस्कार ।
बाटोमा मानिस र कुकुर ठोक्कियो भने बाटो कुकुरले होइन, मानिसले छोड्नुपर्छ । बाटोमा हिँडिरहेको कुकुरलाई जिस्काउँदा त्यो कुकुर करायो भने ठूलो बितन्डा मच्चिन्छ यहाँ ।नेपालमा कुकुरले तिहारमा कुकुर तिहारका दिन मात्र मोज गर्न पाऊँछन् ।
तर, अष्ट्रेलियामा हरेक दिन, समय बार र पलपलमा कुकुरले मोज गरिरहेका छन् । कुकुरको प्रसंगमा नेपाल र अष्ट्रेलियाको कुकुर भेट भएको कुरा गर्न मन लाग्यो, एक दिन नेपाल र अष्ट्रेलियाको कुकुर भेट भएछ, अष्ट्रेलियाको कुकुरको शान मान र फुर्ती देखेपछि बिचरा नेपालको कुकुरले भगवानसँग भनेछ- ‘ हे भगवान मलाई अर्को पटक पनि कुकुर बनाउने हो भने नेपालको होइन, अष्ट्रेलियाको कुकुर बनाइदेऊ ।’
वाह ! क्या बात , कुकुर हुनु त अष्ट्रेलियाको जस्तो …
मङ्ल, बैशाख २८, २०७३ मा प्रकाशित
स्मृतिमा प्रिय सखा शाेभा र रामकृष्ण
श्री श्वेत प्रा.बि. चाैकाेटबाट कखरा सिकेर श्रीखण्डपुर मा.बी. बाट S.L.C. पास गरेर छुटिएका हामी ३ जना साथीहरूलाई स्कुलकाे भेटघाट तथा बनभाेज कार्यक्रमले भेट्ने अवसर जुटाइदियाे। हरेक दिन पाैने १० बजे स्कुल जान म घरबाट निस्कन्थे। शाेभा मलाई प्रर्खेर बसेकि हुन्थिन्। म बाटाकाे गरामा पुग्दा उनी घरबाट झर्थिन्।...
पुनर्जिवन पाएकि शुशिलासँग पुनर्मिलन धुलिखेलमा!
कस्लाई के थहाँ मृत्युले कुन बेला कस्लाई कसरी अाक्रमण गर्छ भन्ने कुरा। हामी पाइलै पिच्छे मृत्यु बाेकेर हिडिरहेका छाै र हिडिरहने छाै। कुनै दिन मन मुटु साटेर एउटै बाटाे हिडेका यी साथीहरूलाई केही समय खर्चेर यीनै शब्दहरूकाे उपहार चढाएँ। बचेका फुर्सदका समयहरूमा अक्षरहरूसित खेल्न रमाउँछु। किताब...
हामीलाई जवाफ चाहियो सरकार, विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तक पढुँ की, कोरियन, हिब्रु र अरबी भाषा पढुँ ?
अरे यार तिमी ? हो यार, म, वनेपा वसपार्कमै भेटियो धनकुमारलाई । धेरै पछिको जम्काभेट, लगभग सात वर्षपछि। हातमा मोटो चाँदीको व्रासलेट ,गलामा सुनको मोटै सिक्रि लगाएको उ झण्डै, चिन्नै गार्हो हुने भएछ। दश वर्षअघि एसएलसी छोडेरै भागेको थियो गाडिमा ढोका ढक्ढक्याउन। कुरैकुरामा गाडिमा सहचालक हुँदादेखि...
विश्वभर झण्डै ६ हजार ८ सय नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण
काठमाण्डौ – विश्वभर झण्डै ६ हजार ८ सय नेपालीमा
लक डाउन र जिवन
लकडाउन र जीवन नेपाल बन्द, कर्फु वा वर्तमान अवस्थाको लकडाउन